कथा – “एक जोडि आत्मा”
देविन बाबु राई
साँझको घाम बगरमा भेला भएर गाउँदै गरेका ईरानी चराहरुका परदेशी गीत सुनेर, मेरो सानो बुलबुलको यादले हृदय भग्न हुन्छ र तुफानी आँधी आउँछ दिलमा । आँखाहरु जलमग्न हुन्छन । एउटा संभ्रान्त परिवारको सुखद परिकल्पनामा आयाम भएका परिस्थितीहरु हुन, यी सब
साँझ पर्न साथ मलाई विरहले लैजान्छ एउटा कोकिलको मधुवन तिर अर्थात मेरो स्मृतिको राजकुमारीको देश । म साँझ साँझ समुन्द्रको किनारमा रातो घामको छायाँ सँग खेल्दै एता र उता दगुर्ने अरबिक बालकहरुलाई हेरिरहन्छु । जब घाम समुन्द्रलाई शिरानी हाल्न आउँछ, तब ती बच्चाहरु त्यहाँ पौडिन आउँछन, उफ्रिन आउँछन । त्यत्रा विधि छल्किएर वर सम्म तहस-नहस पार्दै आउने छालहरुले सम्म बगाएका हुँदैनन उनिहरुलाई । उनिहरु यो संसार अँध्यारोमा फसेर विरानु भैसकुञ्जेल पनि त्यही भैरहेको देख्छु । यिनिहरुका अभिभावकहरु पनि कति ढुक्कका । आज म आफ्नो बुलबुल सँग फोनमा निक्कै बेर बोलेँ , साथै बुल्बुलकी ममि सँग पनि । साँझको समय हो । उँटहरुलाई ठेगान लगाईसके पछि म आफ्नो विश्राम गर्ने ठाउँ तिर लागेँ । फेरि परदेशी चराहरुका वियोगका गीत शुरु भयो । बगरमा उँट चराउँदै हिँड्ने परदेशिहरुले फेरि एकपटक आफ्ना देश सम्झे । मन चञ्चल र अधैर्य भयो । म निस्केँ समुन्द्रको किनार तिर । म छेउमा गएर टुसुक्क बसेँ । यतिखेर म सँग मेरि बुल्बुल भैदिए, मेरि खोलिबुङ भैदिए । रातो घाम आँखाको किनारमा टल्किन आयो । उदाउनु र अस्ताउनु अघि त्यो घाम यहि समुन्द्रलाई चुम्बन गर्न आउँछ । चुम्बन गर्दा गर्दै छुट्छ र डुबिजान्छ धर्ती मुनि । हेर्दै जाँदा निलो समुन्द्रको विच विचमा सेता पानी जहाजहरु निदाईरहेका देखिन्छन ।
कतिखेर आईसकेका रहेछन ती दुई बच्चा सँधै झैँ । उनिहरु निस्फिक्री र निस्सन्देह हातेमालो गर्दै खेलिरहेका, हेरिरहेँ मैले । एउटी बच्ची हुन, अर्को बच्चा । कति सुन्दर सुन्दर ती बच्चाहरु यस्ता साँझ साँझ संसार विरानु भैसकुञ्जेल सम्म खेल्नमा के मज्जा मानेका होलान । यी समुन्द्रमै जन्मेका जस्ता लाग्ने जलका संतान । समुन्द्र विच बाट खेल्दै आउने चिल्ला र पोटिला डल्फिनहरु सँग खेल्छन, नाच्छन र रमाउँछन । त्यही द्रिष्यमा म मोहित हुन्छु ।
मैले उनिहरुलाई नजिकै गएर बोलाउँदा उनिहरु बोल्न मन नलागे जस्तो गरेर बोले । मैले अंग्रेजिमा सोधेँ, रात परिसक्यो घर फर्कनु पर्दैन ?
त्यो फुच्चेले हिन्दिमा भन्यो, हाम्रो वास्ता नगर ।
मैले उनिहरु सँग नम्र भएर सोधेँ, उनिहरु त अरवी नभएर पाकिस्तानिका बच्चाहरु पो रहेछन । तिमिहरु दिदी भाइ हौ भनेर सोध्दा त्यो फुच्चिले भनी, हैन हामी बेग्लै बेग्लैका सन्तान भएनी एउटै आत्मा हौँ ।
एउटै आत्मा ? वाह ! यिनेरु यतिखेरै एक अर्कालाई प्रेम गर्न यत्रो रिपु ?
उनिहरुले एकर्कालाई बोलाउँदा हविव र फरिदा यी दुईको नाम भन्ने थाहा पाउन सकेँ मैले । उनिहरुलाई तिमिहरु जत्रै मेरि बुलबुल पनि छ भनेर सुनाएँ ।
मलाई उनिहरु सँग बोल्न रहरले चरम उत्कर्षमा पुर्यायो । मैले पच्छ्याएँ र उनिहरु सँगै समाहित भएँ । उनिहरु मलाई पनि समुन्द्रको पानी छुन लगाउँथे । म उनिहरुलाई छुन खोज्थेँ भने उनिहरु हाँस्दै भाग्थे ।
यसरी हरेक साँझ उनिहरु सँग खेल्ने एउटा मात बस्यो म सँग । उनिहरु निक्कै बेर सम्म खेलिरहेका हुन्थे । म निस्केर आउँथेँ । समय यसरी नै चल्दै गयो । साँझमा उनिहरु मलाई पर्खी बसेका हुन्थे । ढिलो पुगिहाले रिसाए जस्ता गरेर नबोल्दा मलाई फकाउन घण्टौं लाग्थ्यो । मलाई आफ्नै बुलबुल जस्तै लाग्थ्यो र दिल फुकाएर फकाउँथेँ । उनिहरु कहिल्यै छोइन आउन्न थे । हुन त मुशलमानका बच्चाहरु छोई माग्दैनन । त्यसैले पनि म छुन कर गरिरहेको थिइन ।
एक्दिन म अलिक छिटो पुगेँछु उनिहरु आउन अघि म समुन्द्र तिर टोलाएँ । चारैतिर हेरेँ । निकै पर समुन्द्रको किनार किनार सेता चराहरु उडिरहेका देखेँ । यिनीहरु भुरा माछाको आहाराको खोजमा भौतारिरहेको हुँदो हो । जीवनमा सबैलाई आ-आफ्नै तरिकाको अभाव छ । अभावले सबैलाई दुनियाको मुसाफिर बनाउछ, यायावर बनाउँछ । म यस्तै अनन्त डाँडाहरु नाघेर अनेक समुन्द्र तरेर यहाँ सम्म आईपुगेको छु त्यही आहाराको निम्ति ।
पछाडी ताली बजाएको सुनेर के फर्केँथे, फरिदा र हविव उभिएकारहेछन । उनिहरु खित्का छाडेर हाँसे । आज फरिदाले सेतो जामा लगाएकी रहिछे घुँडा मुनि सम्म उन्का गोरा अनुहार अघि खसेका एक लहरो केश समुन्द्रको चिसो हावाले फर्फराईरहेको थियो भने हविवले सेतो धर्के भेस्टमा खैरो कट्टु लगाएको थियो । उस्का कैला कपाल गोगो काटेको देखिन्थ्यो ।
तिमी डरायौ हो ? हविवले सोध्यो,
हैन मैले भनेँ,
हो डरायौ तिमी । हामिलाई थाहा छ तिमी तर्सियौ है ? फरिदाले पनि त्यसै भनी ।
मैले भने, मलाई कसैको डरै लाग्दैन । मलाई चुँडेलको त डर लाग्दैन ।
उनिहरु चुपचाप उभिए अनि फरिदाले भनी जाउँ आज डल्फिन माथी चढेर पौडी खेल्न खुब मज्जा आउँछ ।
हामी गयौँ । खेल्यौँ खेलिरह्यौँ । रमाइलो भयो । संसार अँध्यारो हुन लाग्दा हामी छुट्टियौँ, हविव र फरिदाले हात उठाएर वाई भने, भोलि पनि छिट्टै आउ है ।
समय नुतन रंगरसमा उनिहरु सँगै वित्यो । दिनभर उँटको गोठाला, साँझ परे पछि एक झंकार इरानी चराहरुको रोदनिय संगीत । त्यस्पछी दुई पाकिस्तानी बच्चा हविव र फरिदा सँगको मनोरम भेटघाट ।
आज बिहान बिहान मेरो बोसले अब हामी त्यो ठाउँ सरेर अर्को मरुभुमी तिर प्रस्थान हुनु पर्ने कुरो बताएकोले म एक्दम निराश हुन पुगेँ । मलाई समुन्द्रमा चोबलिँदै गरेका घामका अनुहार हेर्न नपाउन या चराहरुका वियोगका धुन सुन्न नपाउने भन्दा ती कलिला निर्दोष र सुन्दर बच्चाहरु सँगको विछोडको कल्पनाले क्षत विक्षत भएको थिएँ, मर्माहत भएको थिएँ । दिनभरको काममा त्यति मन गएन । घाम घुमी घुमी गयो र साँझ आयो फेरि । चराहरु बगरमा भेला भएर गाए विछोडका दर्दभरा प्रवास गीत । म निक्कै दुखी भएँ ।
अन्तिम भेटको लागि पोलेको मन लिएर उपस्थिती दिन पुगेँ । उनिहरुले सोधे, के भयो दिव्यांशु ?
मैले भनेँ, अब म भोलि देखि तिमिहरु सँग हुँदिन ।
किन ? किन हुँदैनौ तिमी हामी सँग ? यसरी हामी सँग हुने थिएनौ, भन्ने थाहा पहिल्यै भएको हुँदो हो त तिमी सँग कुनै हालतमा हामी बोल्ने थिएनौ । फरिदाले गुनासो गरी ।
मेरो मालिकले मलाई यहाँ देखि टाढा लैजाँदैछ । यस अर्थमा म तिमिहरु सँग हुन्न । हो मलाई तिमिहरुको खुब याद आउनेछ त्यस्बेला । बरु फोनमा बोल्न मिल्ने भए मलाई तिमिहरुको नम्बर देऊ या मेरो नम्बरमा कल गर ।
उनिहरु एकापसमा हेराहेर गरे । हविवले भन्यो, दिव्यांशु तिमी नजाउ, हामी तिमिलाई खुब माया गर्न थालेका छौँ । हामी चाहन्छौँ कि हरेक साँझ तिमी हामिसँगै यहि समुन्द्रको किनारमा निलो पानी र डल्फिनहरु सँगै खेल्दै बस ।
म मजबुर छु हविव । म विवश छु फरिदा । तिमिहरु सँग रमाउदै घाम विदाई गर्ने दिनहरु अब सकिए । समयले साथ दिन सकेछ भने म तिमिहरु सँग भेट्न फेरि पनि फर्केर आउनेछु ।
आज उनिहरु अलिक उदास देखिए । मैले सोधेँ आज मलाई तिमिहरुको घर परिवार सम्बन्धी केही सुनाऊ । मैले त केही नराखी भनिसकेँ ।
फरिदाले भनी, त्यसो भए तिमी जाने नै हो त ?
हो नि । मैले भने,
त्यस्ले आफ्नो वरिपरि हेरि, अनि दगुरी किनारै किनार । समुन्द्रका तिर तिरमा माछा ढुकिरहेका चराका बथानहरु कराउँदै उडे भुरुरुरुरुर ………!
हविव र म पनि पछ्याउँदै दगुरेर गयौँ । आकाश तिर उडेका चराहरु हेर्दै उदास भएर भनी फरिदाले, तिमी पनि यी चराहरु जस्तै उडेर जान्छौ है ?
म केही बोल्न सकिन । त्यो त भावुक भैसकिछे ।
मैले कुरा बङ्ग्याएँ, मलाई तिमिहरुको घर परिवार बारे सुनाउ ।
धेरै बेर पछि हामी किनारमा थोरै पानीमा तैरिएका डुङ्गा माथी चढेर वरपर बस्यौँ । फरिदाले भनी म भन्छु है हामी दुबैको घर परिवारको कथा ।
मैले सुनेँ – त्यस्ले भन्दै गई –
अदिम पाकिस्तानी केटो तर उ दुबई मै सर्भिस गर्दै बस्थ्यो । उस्ले बहुत सुन्दरी केटि आविरा सँग मगनी विहे गरेको थियो । उस्ले आविरालाई तीन वर्ष पछि आफू सँगै ल्याएको थियो यहाँ । त्यतिखेर फरिदा जन्मिसकेकी थिई । बहुत सुख सुविधामा गुज्रीरहेको थियो परिवार । अदिम भने अल रियमी कम्पनिको स्टिकर र लोगो डिपार्टमेन्टको म्यानेजर थियो । उस्ले खुब पैशा कमाउथ्यो । भौतिक , आर्थिक र मानसिक सम्पन्नताले जीवनस्तर फरक थियो उनिहरुको । अलिक ठूलि भए पछि अदिमले त्यही नजिकैको स्कुलमा भर्ना गरिदिएकी थिई फरिदालाई । फरिदा पापा आमाको खुब प्यारी र राम्री थिई । त्यो बहुत पढ्नमा तगडा र फ्रैङ्क थिई । शिक्षकहरुको पनि उतिक्कै प्यारी ।
त्यस्तै नजिकै पल्लो कोठामा हविव उस्को परिवारमा सुखान्त जीवन लिएर हुर्किरहेको थियो । ईकबल र मोमिनाको अत्यन्त पृय पुत्र थियो उ । ईकबल सेक्युरिटी कम्पनिको वोनर थियो । उस्ले रावल पिण्डी निवासी अत्यन्त सुन्दरी मोमिना सँग प्रेम विवाह गरेको थियो । उनिहरुले पनि आफ्नो हविवलाई त्यही फरिदाकै स्कुलमा भर्ना गरिदिएका थिए ।
विच विचमा ति दुई परिवार सँगै गएर होटेलमा खाना खान जाने गर्थे । सफारी टुर जान्थे । हरेक सुखहरु बाँडफाँट गर्थे ।
केही समय पछि अचानक फरिदाको परिवारमा किचलो भयो । अदिम र आविरा निक्कै झगडा गर्न थालेका थिए । हुँदा हुँदै विछ्यौना पनि फरक हुँदै गए । आविराले खानै पकाउन छाडिदिइ । अदिम छोरिलाई लिएर बाहिर खाना खान जान थाल्यो ।
यता त्यस्तै चरित्रको झगडा शुरु भयो । मोमिनाले हरेक साँझ इकबलको लात र घुस्सा स्विकार्न पर्दै जान थालेको थियो । निक्कै चर्का चर्की झगडाले ग्रसित दुबै परिवार घरी ओल्लो कोठामा महाभारत गर्थे घरी पल्लो कोठामा । फरिदा र हविव दुबै आँगनमा बसी रुन्थे ।
निक्कै ठूलो कचिंगल भयो । कोर्ट सम्म मुद्धाहरु पुगे । केहिकाल शान्त भयो । किनकी मोमिना पाकिस्तानी केही समयलाई आएकी थिई भने यता अदिम कम्पनिको कामले यु एस ए गएको थियो ।
हविव र फरिदा स्कुल बाट फर्केर रूममा पसे । उनिहरुको आज कुनै कारणवश ४ घण्टा अघि छुट्टी भएको थियो । उनिहरु भित्र पस्न बित्तिकै आविराको रुममा कस्तो कस्तो आवाज सुनियो । उनिहरु दुबैले ढोका घचेटे । खुल्लै रहेछ । केवल पर्दाले ढाकेको हुनाले उनिहरुले अलिकती चिहाएर हेरे । फरिदाले देखि आफ्नी ममि माथी हविवको बाबू ईकबल घोप्टिरहेको । अनि उस्का नाङ्गा खुट्टाहरु आविराका तिख्रा माथी चढाईएका । उस्का हातहरु आविराका स्तनमा खेल्दै गरेका । ओँठहरु जोडिरहेका । हेर्दा हेर्दै ईकबलले आविरालाई उत्तानो पारेर आफ्नो काम शुरु गर्यो । तनक्क तन्किएर अररो भए जस्तो गरि आविरा । ईकबल भने पिङ खेले जस्तै खेलिरह्यो ।
अचानक फरिदा चिच्याई मम ! ?
उनिहरु आत्तिएर उठे । आफ्नो अघि ती दुईलाई देखे पछि । उनिहरुको होश गायव हुन गयो । उनिहरुले आफ्ना आफ्ना वस्त्र लगाए । फरिदा झोला फ्याँकेर रुन लागि, बाबा …… भन्दै , त्यस्तै हविवको आँखामा पनि क्रुरताको आँसु थियो । आविरा र ईकबल हेराहेर गरे । उनिहरु एक एक तिर निस्केका त थिए तर केही वेरमै उनिहरु सँगै एकै समयमा फर्किए । उनिहरुको हातमा डोरि थियो । उनिहरु निक्कै क्रुर देखिएका थिए उस्बेला । ती दुबैले झट्ट समाते फरिदा र हविवलाई । आविराले आफ्नो ममता दवाएर भनी, अब तिमिहरुले बाँच्नु भनेको असङ्ख्य हर्कत भोगिराख्नु हो । यसर्थ पृय बच्चाहरु हो तिमी दुई सरासर अर्को संसारमा जाउ ।
फरिदा मृत्युको भयले थर्थर काँपी । हविवको हालत पनि उस्तै थियो । दुबैले हात जोरेर बिन्ती गर्दै भने, मामु हामिलाई नमार्नु । हामी कसैलाई भन्दैनौ ।
हविवको पनि बिन्ती उस्तै थियो ।
ईकबलले भन्यो, यदि यतिकै छोडिदियौँ भने पनि एक्दिन न एक्दिन यो रहस्य अवश्य खुल्नेछ । तसर्थ सरि बेबिज, गुड्वाई ….. गो टु हेवेन एन्ड रेस्ट इन पिस ।
त्यस पछि घाँटिमा कसे दुबैको । फरिदा र हविव खुब छटपटाए उस्बेला ।
अनि ……. ?
म लामो लामो श्वास फेर्दै बोलेँ अनि ? अनि कोहि आईपुग्यो त्यस्बेला ?
नाई ! फरिदाले भनी , हामी दुबै मर्यौँ । हामी मारियौँ । हामी आत्मा हौँ दिव्या । हामी अजिवित आत्मा हौँ । मैले पहिल्यै पनि भनिसकेको थिएँ कि हामी दुई एकै खाल्का आत्माहरु हौँ । मान्छे हुन नपाई पिसाचहरु द्वारा बीभत्स हत्या गरिएका हामी दुई आत्माहरु । उनिहरुलाई पनि साउदिको एउटा शहरमा लगेर झुण्ड्याएर मारिएको छ । मलाई मेरो पृय पापा अदिमको खुब माया लाग्छ । उन्को काखमा बसेर रमाएको याद आउँछ । हविवलाई पनि उस्को प्यारी मम मोमिनाको सम्झनाले खुब तड्पाउँछ । तर हामिलाई थाहा छ । मेरो पृय अदिम र हविवको प्यारी मोमिना अहिले अफगानिस्तानको एउटा शहरमा श्रीमान श्रीमती भएर बसेका छन ।
म भयानक सत्य असत्य कथामा अल्मलिएँ । मैले आत्मा भनेर पत्याउनै सकिन । तर जब मैले उनिहरुलाई छुन खोजेँ र हावालाई छोए जस्तो मात्र भए पछि म झस्किएँ ।
उनिहरु केही पर सरेर बोले, दिव्यांशु गुडवाई …..
उतिखेरै निक्कै ठूलो छाल आएर हामी बसेको डुङ्गा समेतलाई ठक्कर दियो । म त उच्छिटिएर निकै वर खस्न आईपुगेँ । फेरि सुनसान भयो । रात झमक्कै परेछ । धमिला छायाँ बाट हविव र फरिदा गुडवाई भनेर कराउँदै थिए । म एताउती हेर्दै निस्केँ । फर्किएर हेर्दा विच समुन्द्रको पानीमा एक ढिक्को जून खसेको रहेछ । मेरो ईन्द्रिय फरिदा र हविवको जीवन कथाले चौपट भएर आयो ।
ओहो कस्तो शुन्दर आत्मा ! कस्तो निर्दोष प्रेत ।
म सरासर फर्किएँ र सोचेँ ! कस्ता अगती बाबू र आमा आविरा र ईकबल । संसारका सब भन्दा ठुला अपराधी ।
नोट ; बच्चाहरु सँग कुराकानी भएका भाषा हिन्दी भनेर बुझाउन चाहन्छु ।
Tweets by @ HamroPratibimba
All right reserved @ Hamropratibimba Team